Kwadebe ọrụ gị na CISCO Prime Infrastructure Training | Ọ BỤ
Kwadebe ọrụ gị na CISCO Prime Training Training
Iche echiche banyere ọrụ ọzọ, mmelite na ọkwa gị ugbu a ma ọ bụ ezi mmụba mmụta na gburugburu, CISCO Gbasara Ọzụzụ Akụrụngwa nwere ike inye gị ezigbo mma. Ọ bụ ihe dị ka oge ị ghọtara na Network na-atụgharị oge maka ike ụwa IT. Nke kachasị mma, ịchọta ma gbanwee usoro ahụ, ka ọ na-emepe ka ọ na-emepe maka ịga n'ihu na mpaghara ahụ. O doro anya na nke a dị mkpa nke kachasị mma mmụta na ike ịtọ na nke a ga-ahụ ma dị mkpa ma ọ bụ karịa nke kachasị mma, ịchọrọ ka ihe ọmụma ndị dị ịrịba ama gbanwee azụ; ị chọrọ CISCO Ngwá Ọrụ Akụrụngwa na asambodo.
CISCO Gbasara Ọzụzụ Akụrụngwa ga-enwe ike site na ịhọrọ oge ọ bụla n'ime oge ọmụmụ ụlọ ma ọ bụ site na nkasi obi nke ụlọ gị. N'ebe a, ndị ọkà okwu na-akwado gị. Ndị ọkà okwu a nwere ahụmahụ nwere ike ịchịkwa gị site na ịga site na inye nkwado ziri ezi na site nyocha ọganihu. Site na ntụziaka na ọzụzụ na ikike siri ike ịmalite iji ihe kachasị mkpa ma dị mkpa, ị ga-ezute njem na-eduzi gị nke ga-eme ka i nwee ihu na ịbanye na ọgba aghara nke ụwa ọkachamara.
Kedu ihe bụ uru bara uru?
Ndị nkụzi a mụtara nwere ike imebi echiche echiche ahụ ma kọọrọ ha n'ọnọdụ dị mma maka gị.
Ndị ọkachamara a zuru oke nwere ike ịbịaru ọsọ ọsọ iji ghọta mkpa nke onwe gị ma nye gị mkpa.
Site na ntughari ozi na-enweghị nghọta ịbanye n'ime oge dị mkpirikpi ahụ, ndị ọkachamara nwere nkà na-enyere gị aka ikpuchi ihe omume ahụ n'ime na pụọ ​​ma tinye gị maka ule ahụ n'ime oge.
Site na nnukwu, ụdị ahụmahụ, ọkachamara n'ụzọ ọrụ, ọrụ ọzụzụ na-eme ka nke a dị n'ime na pụta; enyere gị aka ịmepụta ozi pụrụ iche ma mee ka ị kwadoro ihe ngosi.
Nzọụkwụ site na ntụziaka iji banye Ngwaọrụ na Ngalaba Ndị ọzọ na IGP Route Redistribution